हिन्दु धर्मशास्त्रमा के हो कलियुग ? कसरी सुरु भयो ?:: Naya Nepal
हिन्दु धर्मशास्त्रमा के हो कलियुग ? कसरी सुरु भयो ?
काठमाडौं । सनातन धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलीयुग पर्छन् ।हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कली युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।द्वापर युगको अन्त्यपछि शुरु भएको युग नै कलि युग हो । कली युगको अन्त्यसँगै सारा संसार ध्वंस भई नयाँ संसारको शृजना हुने विश्वास गरिन्छ । कलीयुग ४ लाख ३२ हजार वर्षको हुने शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।सत्य युग चार चरणमा रहेको थियो जसको आयू १७ लाख २८ हजार वर्षको रहेको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै त्रेता युग २ चरणमा रहेको थियो । जसकोआयु १२ लाख ९६ हजार वर्ष रहेको बताइएको छ ।
तेस्रो युग द्वापर युगका दुई चरण रहे जसमा ८ लाख ६४ हजार बर्ष रहेको धार्मिक विश्वास रहेको छ । तर, शास्त्रहरुमा यष्गहरुको सयम र वर्षबारे फरक फरक व्याख्या गरिएको छ ।१२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ । कलियुग चौथो युग हो । शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो ।कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास लिइन्छ ।कलि युगमा भगवान विष्णुको दशौं अवतारको रुपमा कल्किको प्रभाव रहेको विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कल्किको रुपमा विष्णु कलियुगको अन्तिममा उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर धर्म ग्रन्थहरुमा भनिएको छ। कल्की अवतार कलियुग र सत्ययुगको संधिकालमा हुनेछ।यो अवतार ६४ औं कला युक्त हुनेछ। कल्कि पुराणको अनुसार, विष्णुको अवतार कल्किले देवदत्त नाम गरिएको घोडामा चढेर संसारबाट पापीहरुको विनाश गर्नुहुन्छ र धर्मको पुन स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कलियुगको अन्त्य हुन्छ र फेरी सत्य युगको प्रारम्भ हुन्छ।
अवरोध हटाउन ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा दिइने
दुई वर्षदेखि अवरुद्ध सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४, मरुवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुई वर्षयता रोकिएको थियो ।स्थानीयवासीको मागअनुरूप ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा भुक्तानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति जनाउनु भएपछि अवरोध खुल्ने अवस्था आएको हो । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने ऐलानी जमिनको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने र प्रसारण लाइनको टावर प्रस्तावित स्थानभन्दा अन्यत्रै सार्नुपर्नेलगायत सर्त राख्दै आएका थिए ।
मन्त्री पुनले मङ्गलबार सो क्षेत्रका सङ्घीय सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, कटारी–४ का वडाध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र सोलु कोरिडोर आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी स्थानीयवासीको मागअनुसार ऐलानी जमिनको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि सहभागीले निर्माणको अवरोध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।यो प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा गत २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ ।सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको जलजले, खोटाङको बुइपा र ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार कुल ३०२ वटा टावरमध्ये २८८ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टाँग्ने कामसमेत सकिएको छ ।
बसपार्कमा रित्ता बसको ताँती
तिलोत्तमा — गत वर्ष यतिबेला बुटवलस्थित बसपार्कका काउन्टरमा टिकट खरिद गर्नेको ताँती देखिन्थ्यो । यसपालि यात्रु छैनन् । बसका लाम मात्र छन् । एउटा गाडीमा ५ जना यात्रु पाउन मुस्किल छ ।बसका सहचालक यात्रु खोज्दै भौंतारिन्छन् । यात्रु नपाएपछि ७ वटा वातानुकूलित बस भएका बुटवल–१ कालिकानगरका कृष्णप्रसाद सापकोटाले तीन पटक मात्र गाडी बुटवलबाट काठमाडौंका लागि छुटाए ।‘धेरैमा १७ जना यात्रु चढाएँ,’ उनले भने, ‘अहिले बसभन्दा सानो गाडी सुरक्षित मानेका छन् ।’ बसमा सम्पूर्ण सुरक्षा अपनाइए पनि सर्वसाधारणले विश्वास नमानेकाले रित्तै गाडी फर्काउन बाध्य रहेको उनले बताए । १४ वर्षदेखि बुटवल–गुल्मी खण्डमा बस चलाइरहेका तुलसीराम पाण्डेले एक महिनामा तीन पटक मात्रै गाडी चलाए । लु१ख ९८०६ नम्बरको उनको बसमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या ५ जनाभन्दा बढी नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘गाडी त गुडाएको रहेछ भन्न मात्रै हो,’ उनले भने, ‘आउने केही छैन, बरु उल्टै बिग्रिए तनाव हुन्छ ।’ अघिल्ला वर्षमा ट्रिपबाहेक पनि ४/५ चोटि एक्स्ट्रा जाने गरेको उनले बताए । सरकारले समेत सूचना जारी गरिसकेकाले चाडपर्व भन्दै गाउँ जाने मानिस नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘६ महिनादेखि घर बस्दाबस्दा वाक्क भएपछि गाडी निकालियो,’ सिद्धार्थनगर–२ का सन्तोष शाहीले भने, ‘मान्छे डरले चढ्दैनन्, सबैले निजी साधन बनाइसकेका छन् ।’ एक महिनादेखि बुटवल–भैरहवा खण्डमा गाडी गुडाउँदा ८ जनाभन्दा बढी मानिस कुनै दिन नचढेको उनले बताए । ‘सिद्धार्थ यातायात प्रालिअन्तर्गत रहेको उनी कार्यरत माइक्रो बसमा आफ्ना साधन नभएका, अत्यावश्यक नै परेर हिँडेका मानिस मात्र चढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।